Search လိုးကားပေါင်းစုံ - GenFK.com
S1:E33 What's in this pig?!
Watch this video to find out WHAT'S IN THE PIG!
5 Feb 2018 · 190K views
ေ ကြ ကွဲနေ့ ညတွေ
ေ ကြ ကွဲနေ့ ညတွေဆောင်းဦးလှို င် ၊ စ ည် သူ လွ င် ၊ အဲ လ က် စ် https://www.youtube.com/watch?v=-mtcJZTnqp8 ကို ယ် မြ င် ချ င် တဲ့ လ မ င်းရ ယ် ကို ယ် မ က် ချ င် တဲ့ အိ ပ် မ က် ရ ယ် ညတွေ တ စ် ည မှရောက် မ လာဘူးေ ယာင်ယောင် ပြီးကို ယ်ခေါ်နေ မိ တ ယ် ဖြ တ် သ န်းလာတဲ့ အ ရိ ပ် ကလေးဟာမ င်းဆို အား လုံးပြ ည့် စုံ သွား မ ယ် ရ င် မှာဟာတာတာနဲ့ တ စ် ခု လို အ ပ်နေ လို့ မ င်းကိုဝေးရ င် စိ တ် ဓါ တ် ကျ လာတ ယ် တ က ယ် ကို အ ထီးကျ န် တဲ့နေ့တွေ ကို ယ် သိ ပ် လွ မ်းေ န တဲ့ ညတွေ ဒီ လို ဆ က် တို က် ကြီးဆို ရူးေ တာ့ မှာပဲ မ ညာခဲ့ ဘူးကို ယ် တ စ် သ က် လုံးမှာချ စ် လာတာတ စ်ယောက် ထဲ ပါ မ င်းကို ခ ဏ မှ မ ခွဲ နို င် ဘူးပြ င် ဆ င်နေ ခဲ့ တ ယ် အ နာဂ တ် အ တွ က် လ က် တွဲဖော် အ ချ စ် ဆုံးနဲ့ သွား မ ယ် ဆုံးဖြ တ် ထား သူ ပါ
သီ ခြ ငျး တှေ နဲ့ က မ်ဘာ
17 Jun 2018 · 59K views
ကဲ ပြောထားတဲ့အတိုင်းတင်ပေးလိုက်pနော်like&shareလေးတော့လုပ်ကြ ကြိုက်ရင်ဆက်တင်ပေးမယ်
K̭̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋a̭̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋ṷ̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋ṋ̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋g̭̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋ ̭̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋P̭̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋y̭̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋a̭̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋ḙ̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋ W̭̬̙͍͍̙̬̭͋͒̌̈́̈́̌͒͋i̭̬̙͍͋͒̌̈́ṋ̬̙͍͋͒̌̈́
****** Royal Hero Production မှ ပွဲဦးထွက်တင်ဆက်လိုက်သော Original Gangster2ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ****** Original Gangster (2) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ၂၀၁၇ ဇွန်လကုန် ဇူလှိုင်လဆန်းတွင် အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရုံတင်ပြသပါတော့မည်။ မြင့်မြတ် ယုန်လေး ဇင်ဝိုင်း ခင်လှိုင် ယုသန္တာတင် ပန်းအိ(Supermodel) ကလေးသရုပ်ဆောင် ( ထက်ထက် သားသား ) Special Guest - အကယ်ဒမီထွန်းထွန်း Kညီ ခင်ဝင့်ဝါ စိုးနန္ဒာကျော် ထားထက်ထက် ခိုင်သဇင်ငုဝါ နှင်းနန္ဒီချို နန်းဝေဝေထွန်း စီစဉ်သူ - စိန်ထွေး ဇာတ်လမ်း - ယုန်လေး ဇာတ်ညွန်း - မင်းညီ ဂျိုး ဒါရိုက်တာ ဂျိုး Credit - Original Gangster FB Page
Myanmar Film Showcase
4 Jun 2017 · 716K views
ေ ကာင် မလေးတ စ်ယောက် အကြောင်း
ေ ကာင် မလေးတ စ်ယောက် အကြောင်းေ ဆာင်းဦးလှို င် ၊ ဝို င်းစု ခို င် သိ န်းhttps://www.youtube.com/watch?v=uWKq_m5o498 အ စွ မ်းရှိ သလောက်တော့ ကြိုးစား ခဲ့ တ ယ်လောက ကြီးက မ တ ရား ဘူးကွ ယ် ကံ များကောင်းဖို့ ယ တြာေ ချ ရ ဦးမ ယ်နွေ နဲ့ မိုးအ တွ က် ထီးကလေးရှိ တ ယ်ဆောင်းတွ င်းကျတော့ တိုးဖ က် ထား မ ယ် ဘာလိုသေးလဲ ကို ယ် နဲ့ က မ္ဘာအ ဆုံးလို က် ခဲ့ ပါ အ ချ စ် ရ ယ်လျှောက် သွား မ ယ် လာမပြောနဲ့ ဘ တ် စ် ကားတွေ ကျ ပ် လွ န်းတ ယ်နေ ပူ ထဲ သွားတော့ အ သားလေးမ ည်းပါ မ ယ် တ က ယ် ချ စ် တာဘာလု ပ် မ လဲ ခံ စား မနေ ချ င် ဘူးကွ ယ်ပျော်ပျော်နေ နို င် ကာမှ အ သ က် ကလေးရှ ည် နို င် လိ မ့် မ ယ် ကား သ စ်လေးနဲ့ အ ကြို အ ပို့ လု ပ် မ ယ် တ စ်လောက လုံးက အ ချ စ် ကလေးအ တွ က် ကွ ယ် စူ ပါ မား က က် အ ကု န် ရှိ သ မျှ မှာမ င်းဝ ယ် ဥ တု သုံးပါးဂ ရု မ စို က် နဲ့ ကွ ယ် အ ချိ န် ရှိ တို င်းဘဲ ဇိ မ် ကျ ရ မ ယ် ဘာလိုသေးလဲ ကို ယ် နဲ့ ခ ဏလေးလို က် ခဲ့ ပါ အ ချ စ် ရ ယ် ဘ ယ်တော့ လာေ ခါ် မ လဲ ကွ ယ် အ လှတွေ ပြ င် ထား မ ယ် ရ င် ခု န် လွ န်းအား ကြီးလို့ခေါ င်းညိ တ် မိ ပါ တ ယ် တ က ယ် ချ စ် တာယုံ မ လား ကွ ယ် အ သ ည်းမ မာနို င်တော့ လ ည်းဒါ ဟာပ ထ မ ဆုံးတို့ ရဲ့ ဝ န် ခံ ခြ င်းဘဲ
22 Jan 2019 · 3.3K views